LEGO Adidas Originals အတွက်သီးသန့်သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ပါသေးသည်
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 168 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Creator Expert, Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ, Lego, Lego Adidas, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego
မမေ့ပါနှင့်၊ သင်ယခုလူကြီးများအတွက် LEGO အတွက် ၁၅% လျှော့စျေးကို ၀ ယ်နိုင်သည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား နှင့် Brick Fanaticsသီးသန့်ကုဒ်မှာ Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ.
ငါတို့ p ရှိတယ်artယူလာရန်အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်နှင့်နီးစပ်သည် Brick Fanatics LEGO for Adults set ကိုဗြိတိန်မှာစတာလင်ပေါင် ၇၉.၉၉ ဖြင့်ဇူလိုင်လတွင်စတင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အခုမှတတိယမြောက် p ကိုရောက်နေပြီarty ပထမဆုံးအကြိမ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များကို၎င်းအားလျှော့စျေးများအထိဖွင့်သည် LEGO Groupသူ၏လက်လီစျေးနှုန်းကိုအကြံပြုသည်၊ သင်ကုဒ်ကို သုံး၍ ၎င်း၏လက်လီစျေးနှုန်းကို ၁၅% အထိလျှော့ချပြီးပြီ BF154 at Jadlam.
၎င်းသည်တည်ဆောက်နိုင်သောနည်းပြ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို£ ၆၇.၉၅ သို့သာစတင်ခဲ့ပြီး LEGO အတွက်လူကြီးများအတွက်ငါတို့စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟိ LEGO Group ၂၀၂၁ တွင်၎င်း၏ ၁၈+ အစုစုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကွဲပြားစေခဲ့သည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား ၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအရွယ်ရောက်ပရိသတ်ကိုရောက်ရန်ရည်ရွယ်ပုံ၏နောက်ဆုံးဥပမာသာဖြစ်သည်။
၇၃၁ အပိုင်းအစ၌သင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုပုံစံကို 'စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသော၊ ပျော်စရာကောင်း။ အလိုလိုသိသော LEGO အစုံ' ဟုချီးမွမ်းပြီး၎င်း၏ထူးခြားသောထုပ်ပိုးမှုကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော့စျေးကုဒ်သည်ယနေ့ညစက်တင်ဘာ ၆ ရက်ည ၁၁ နာရီ ၅၉ အထိသာအကျုံး ၀ င်သည်။ မင်းဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်စောင့်ကြည့်ပါ Brick Fanatics အနာဂတ်မှပိုမိုသီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ.
အော်ဒါမှာရင် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား မှ Jadlam ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော့စျေးကုဒ်ကို သုံး၍ ၎င်းအားကူညီပံ့ပိုးရန်သင်ကူညီလိမ့်မည် Brick Fanatics (မင်းအတွက်၊ ငါတို့စာဖတ်သူတွေအတွက် LEGO အစုံတွေဆီကငွေတွေကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးတာဘဲ) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← အသစ် LEGO Ideas ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့သည်
Lego Batman ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile သည် LEGO.com သို့ပြန်သွားသည် →